Beello Dagaalsanaa Muddo 10 Sano Ah Oo Lagu Heshiisiiyey Mudug – Goobjoog News
Kulan lagu heshiisiinayey Labo beel oo dirir dhexmartay ayaa ka dhacay deegaanka Af Barwaaqo ee bariga gobolka Mudug, waxaana kulankaasi ka qeybgalay wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka gobolka Mudug, waxgrad iyo Odoyaal dhaqan kala matalayey Labada beel ee heshiiska gaaray.
Colaadda Labadan dhinac ah ayaa ahayd mid soo jiitameysay muddoa 10 sano ah, waxaana hadda laga gaaray heshiis hordhac ah, taasi oo qeyb weyn ka qaateen maamulka Galmudug iyo maamulka deegaanka.
Qaar kamid ah waxgaradkii kala matalayey Labadaasi dhinac ayaa sheegay iney soo dhoweynayaan heshiiskaasi la gaaray, waxayna sheegeen iney hirgelin doonaan heshiiskaasi.
Waxay sheegeen waxgaradkan iney gacmaha is qabsadeen Labada dhinac, islamarkaana ay diyaar u yihiin iney ka wada shaqeeyaan nabadda iyo walaalnimada.
Suldaan Cabdi Madoobe oo ah suldaanka guud ee beelaha dirirtu dhexmartay ayaa sheegay in dhib badan ay ka mareen in Labadan beel ay heshiis ku qanciyaan, balse ay ku faraxsan yihiin in la helo nabad iyo is faham, dibna loo soo celiyey walaalnimadii.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Maxamed Shire oo isna halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyey Labadan beel iney so oaf jaraan colaaddii 10-ka sano ka dhaxeysay, wuxuuna kula dardaarmay in heshiiska la adkeeyo oo laga shaqeeyno nabadda iyo is dhexgalka bulshada.
Khasaaraha Ka Dhashay Shilkii Gaari Ee Maanta Ay Galeen Ciidamo Ka Tirsan Puntland Oo Sii Kordhay (Sawiro)
Vtkghs geefdf Cialis generic cheap cialis
Qoowfj pnwccs Real cialis for sale cialis 10mg
Eqvjix bvszfx cheap generic viagra online best place to buy cialis online
Dbwqmo dyeivh Where to Buy Cialis generic cialis canada
Gpdtiw neltsz Buy cialis online online canadian pharmacy
Bnijgi sduazu cvs pharmacy Mcroo